Ciidanka Xoogga oo sheegay in ay dileen Ajnabi Shabaab ka tirsanaa | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidanka Xoogga oo sheegay in ay dileen Ajnabi Shabaab ka tirsanaa
Ciidanka Xoogga oo sheegay in ay dileen Ajnabi Shabaab ka tirsanaa
Taliye Sare oo ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warbixyay Howlgalada gaarka ah ee ka socda degaanada Gobolka Shabeellaha Dhexe.
General Maxamed Axmed Macalin (Koronto) oo ah Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka qeybta 27-aad oo ka howlgala degaanada Hirshabeelle ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan Howlgalada lagula dagaalamayo ururka Al-shabaab.
Wuxuu sheegay Shabaab inta badan in weeraro gaadmo ah oo ku dhufo ka dhaqaaq ah ay ka geystaan wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar, balse taasi wixii hada ka dambeeya ay qorshe ka dejiyeen, wadadaasina ay geeyeen Ciidamo dheeraad ah.
General Koronto ayaa sheegay Howlgal maalmo kahor ka dhacay degaan ka tirsan Shabeellaha Dhexe in Ciidanka xoogga dalka ay ku dileen nin Ajnabi ahaa oo ka tirsanaa Shabaab, kaasi oo uu sheegay inuu ka soo jeedo wadanka Comoros.
Wuxuu sheegay xogta ah ninkan inuu u dhashay wadanka Comoros in ay ka heleen xog hoose oo ay siiyeen dad raggan ku degaan ahaa, isaga oo sidoo kale tilmaamay in Howlgaladan ay yihiin kuwo sii socon doona.
Taliye Koronto oo la hadlay VOA ayaa sheegay Howlgaladan in ay ka duwan yihiin kuwii sanadihii hore, maadaama uu tilmaamay in garab iyo hiilo weyn ay ka heystaan Dowladdan, sidoo kalena Howlgaladan ay yihiin kuwo balaaran.
Al-shabaab ayaa dhowaan Odayaal ay ka kala keeneen Gobolada dalka waxa ay kula kulmeen meel u dhow degmada Aadan Yabaal, taasi oo weli muujineysa awooda Shabaab ee Gobolka ay ku leeyihiin, balse ugu dambeyn General Koronto ayaa sheegay arrintaasi in ay la socdaan ayna ku wajahn yihiin goobaha ay Shabaab kaga sugan yihiin Gobolka.